Montserrat typography: yintoni na, ukusetyenziswa kunye neempawu jikelele zokuchwetheza | Abadali be-Intanethi
Kukho iifonti ezisinceda siqonde ukuba yintoni uyilo okanye sicacise ukuba izakuba njani. Kukho abanye abasishiya singaziwayo kwaye ngumyalezo ongasemva osixelela ukuba kuya kuba njani. Iintlobo zochwethezo ziyilwe ngenjongo yokuba yonke le mibuzo ibiziphendulela ngaphandle kwesidingo samagama.
Kwaye kungenxa yesi sizathu ukuba baye baba yinxalenye yoyilo amashumi eminyaka. Into abambalwa abayaziyo yimbali yabanye babo. Ngeli xesha, size kuthetha nawe malunga netypography engaqhelekanga kakhulu kwaye imele kakhulu, Ukuchwetheza kweMontserrat. Sifuna ubhale ngayo kuba yenye yeefonti ezinokungena ngokugqibeleleyo kule nto uyikhangelayo.
Ngesi sizathu, siya kukucacisela ukuba yintoni le nto ibalulekileyo yokuchwetheza kwaye kutheni injalo. Qhubeka ufunda kude kube sekupheleni kuba kuya kufaneleka.
1 Montserrat typography: yintoni na
1.2 Ukusetyenziswa rhoqo
2 Apho ukhuphela ifonti yaseMontserrat
2.1 Imigca ye Google
2.3 Umlambo wefonti
2.4 Ifonti Freak
3 Ezinye iintlobo ezifanayo zomdla
3.5 UFranklin Gothic
Montserrat typography: yintoni na
Ukuqala kunye nokukwazi ukuqonda ukuba yintoni le typography, kufuneka sibuyele kwizinto ezilula. Ke ngoko, sichaza olu hlobo lochwethezo njengo ifonti eyenziwe ngumyili uJulieta Ulanovsky ngo-2010.
Njengoko ilizwi lakho libonisa, Ayiphefumlelwanga nto ingaphantsi kwendawo encinci yaseMontserrat, ukongeza, inotyekelo oluthile kwiipowusta zokuchwetheza ze-20s.
Ayimangalisi into yokuba lolona didi lochwethezo lubalaseleyo, njengoko luhlala luhamba neempawu ezininzi kunye neeprojekthi zoyilo lwegraphic. Kungenxa yesi sizathu ukuba asikwazanga nokuphosa ezinye zeempawu eziqhelekileyo ezizigcinayo ngoku kwaye zichaza ukuba kutheni zisasetyenziswa njengeyona nto iphambili kwizihlandlo ezininzi.
Uya kumangaliswa kukwazi ukuba zikhangeleka njani ngokwasemzimbeni kunye nokuba yintoni na eyona nto ziyisebenzisayo.
Okwangoku, ukuba sithatha isigqibo sokukhuphela olu hlobo lochwethezo sinokubona ukuba luneenguqulelo ezahlukeneyo kuyilo lwayo. Inguqulelo eqhelekileyo (yesiqhelo) yale fonti yathengwa yinkampani yeeFonti zikaGoogle kwaye sinokuyikhuphela khona simahla. Ukongeza, ineenguqulelo zayo ezihambelanayo, nto leyo eyenza kube nomdla ngakumbi ukuyibona: uguqulelo olungqindilili, olunye uguqulelo kunye nekekeli ekekeleyo okanye uguqulelo olukrwelelwe umgca ngaphantsi. Ngaphandle kwamathandabuzo, linqaku lokuthanda ukukwazi ukufumana uhlobo lochwethezo oluneenguqulelo zesibini kuba kumaxesha amaninzi, ukuba siyisebenzisela iintloko-ndaba, sinokudlala ngobunzima kunye notyekelo lwefonti.
Kangangamashumi eminyaka, i Montserrat typeface ayikhethwanga njengommeli wohlobo lweelogo okanye iibrendi, kodwa nangona kunjalo, uninzi lweempawu luyisebenzisile njengendawo yentengiso yeepowusta okanye iindawo zentengiso. Yiyo loo nto sinokuyifumana kwiiflaya ezininzi, iiwebhusayithi okanye iindawo ezifuna imizobo emininzi. Ngenxa yoluhlu lwayo oluphezulu lokufundeka, ikwahlala kwizicelo ezininzi ezisetyenziswa rhoqo, oko kuyenza ibe yi-typeface efanelekileyo kuzo zombini iwebhu kunye nemidiya ebonakalayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ayishiyi nto ifunekayo.
Apho ukhuphela ifonti yaseMontserrat
Iifonti zikaGoogle sesinye sezona zixhobo zisetyenziswa ngabasebenzisi kwi-intanethi. Yiwebhusayithi efanelekileyo yokukhuphela iifonti ezahlukeneyo. Zonke ziphawulwa ngokukhululeka ukusetyenziswa kwaye ziifonti eziqulathe uluhlu oluphezulu lokufundeka. Ukongeza, inoluhlu olubanzi lweefonti kunye nenjini yokukhangela eyilelwe ukufumana ezona fonti zibalaseleyo ezimele uyilo lwangoku lomzobo. Akukho mathandabuzo, lolona khetho lungcono ukuqala kwihlabathi loyilo.
Ukuba bekufuneka sicinge ngewebhusayithi apho sinokukhuphela iifonti simahla kwaye ineendlela ezahlukeneyo ezingaphezu kwezigidi ezisixhenxe, ngokungathandabuzekiyo iya kuba yiDafont. Ngesi sixhobo, Awusenasizathu sokukhuphela ezinye zeefonti ezilungileyo. Ukongeza, ikwanenjini yokukhangela ebanzi kakhulu, eyenza kube lula kuwe ukuba ufumane ifonti elingana neprofayile yakho yomsebenzi. Sukuchitha ixesha kwaye uqalise ukusebenzisa esi sixhobo siphezulu, kuba awuyi kuzisola kwaye uya kunika umsebenzi wakho ngokuchukumisa ngakumbi kunye nobuqu.
Umlambo wefonti sisixhobo esisebenza njengenjini yokukhangela yefonti. Ikwanethuba lokuzikhuphela ngokukhawuleza nasimahla. Iphawulwe ngokuba iqulethe uluhlu olubanzi lomthombo. Sinokufumana iifonti ezinoyilo lwegothic ngakumbi, ezinye ezinoyilo lwetekhnoloji ngakumbi, ezinye ezibhalwe ngesandla ngakumbi kwaye zilinganisa iifonti eziyilwe ngesandla. Sikwafumana iifonti ze-roman kunye ne-sans serif sans serif. Ngamafutshane, awunakuphoswa sesi sixhobo sizele ziifonti zoyilo olwahlukileyo. Kwakhona, ayimangalisi into yokuba i-typography yakho efanelekileyo inokufunyanwa kumawaka eethebhu enayo.
Inketho yethu yokugqibela kunye nencinci apho unokukhuphela iifonti ngaphandle kweendleko yiFont Freak. Enye indlela yasimahla eneefonti ezingaphezu kwamawaka angama-8 onokuzikhuphela apho malunga nama-400 abayili begraphic ababandakanyekayo.
Yintoni enokuthi ingaqinisekisi okanye engabaqinisekisanga abasebenzisi abasele beyizamile, yileyo asikwazi ukulungisa umbala kodwa ubukhulu kuphela. Yinkalo engalunganga, kuba umbala uyinto ebalulekileyo kwiifonti.
Ezinye iintlobo ezifanayo zomdla
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba bekufuneka sikhethe enye inkwenkwezi, ibiya kuba yiHelvetica typeface. Ithathwa njengeyona ndlela isetyenziswayo yokuchwetheza ehlabathini. kwaye ayimangalisi, kuba inkangeleko yayo iyenza ibe ngumfanekiso oyilwe ngokugqibeleleyo.
Ineentlobo ngeentlobo zeenguqulelo. Yenziwe ngo-1957 ngumyili wegraphic uMax Miedinger kunye noEdouard Hoffmann. kwinkampani ethile ezinikele kuyilo lochwethezo. Olu chwethezo lwaba yifonti yeenkwenkwezi yee-60s kunye ne-70s kwaye ngenxa yendlela yobugcisa besimanjemanje, iye yaba yifonti ekhoyo namhlanje.
I-Futura yenye yeefonti ezingena kwi-5 ephezulu yeefonti ezisetyenziswa kakhulu. Iyilwe ngumyili wegraphic uPaul Renner ngo-1925, Luhlobo lochwethezo lwe-sans-serif oluphenjelelwa yindlela yobugcisa yase-Bauhaus. Phakathi kweempawu zayo ngokubanzi, kuyabonakala ukuba igcina imbonakalo yejometri ngokufanelekileyo ngokweendlela zayo, ukongezelela inezinye iinguqulelo zayo ezisuka kwizivubeko ezicolekileyo ukuya kwimivumbo engqindilili kunye nephawulwe ngakumbi: ngqindilili, semi ngqindilili, ngqindilili kakhulu, njl. Ludidi lochwethezo olufanelekileyo lokusebenzisa okubhaliweyo kunye nokubhaliweyo okukhulu, okwenza kube yifonti esebenza kakhulu.
I-Garamond typeface yifonti eyilwe ngumyili wohlobo, uClaude Garamaond, owaziwa ngokuba ngumshicileli kunye nomzobi. Kwakubaluleke kakhulu ngelo xesha ukuba iiprojekthi zayo zaqala ukuba nokubaluleka okuthile. Ngoko ke, ngaxa lithile kumsebenzi wakhe, uKumkani uFrancis I waseFransi wamyalela ukuba ayile umatshini wokuchwetheza owawuza kuba nothotho lwamagama esiGrike awayefana nawo ngelo xesha.
Okwangoku, zininzi iinguqulelo zale fonti, kodwa eyona isetyenziswayo yi-Adobe Garamond typeface, eyilwe nguRobert Slimbach kwaye sinokuyifumana kwimithombo efana ne-Adobe Fonts.
I-Bodoni yinkwenkwezi yoonobumba baseTaliyane belo xesha. Wazalwa enefani yomyili wayo wohlobo uGiambattista Bodoni. Ndidale olu hlobo lochwethezo oluye lwaduma kakhulu namhlanje, ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX kwaye yaba luvuthondaba lwenguquko yethutyana yendlela yokuchwetheza yaseRoma. Luchwethezo oluphawulwa ngokuqulatha umahluko ocolekileyo nongqindilili kwiimo zawo. Ukongeza, ikwaqulathe ezinye iifandesi ezibhityileyo ezibabonakalisa kakhulu. Kukho iinguqulelo ezininzi ezihlaziyiweyo, ezifana naleyo kaBauer Bodoni eyilwe ngo-1926 kwisiseko esithile.
Akunakwenzeka ukuba ungayiboni le typografi imelwe kwiipowusta ezininzi, iilogo, okanye iindawo zentengiso. Umyili ngokwakhe ubonakaliswa ngokuba ngumbhali wezinye iifonti ezininzi kunye noyilo, nto leyo eyenza ukuba olu hlobo lochwethezo luthathwe njengefonti ebalulekileyo kwihlabathi loyilo. Ekunye nomcebisi wakhe kunye noyise, benze malunga ne-190 yeefonti ezingaphezulu ezisasazwa kwiindidi ezahlukeneyo zokuchwetheza.
I-Franklin Gothic yenzelwe i-1904 kwaye ngoku inikezela ngeendidi ezahlukeneyo zeenguqu ezahlukeneyo ezibonisa kakhulu, ukusuka kubunzima obufanelekileyo kwizihloko ezinkulu, ukuya kubukhulu obuncinci okanye obuqhelekileyo bokuqhuba iitekisi kunye nemihlathi emikhulu.
Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi malunga nolu hlobo lokubhala sele ludume kakhulu kwaye lumele kwicandelo loyilo lwegraphic. Njengoko ukwazile ukuqinisekisa, uninzi lweefonti esizikhankanyileyo ziyilwe ngokuphefumlelwa: indawo, umntu, into ebalulekileyo kwimbali yehlabathi okanye yoluntu, njl.
Yonke ifonti okanye ifonti esiyifumanayo iyilwe ngenjongo yokuqala. Ngoku lithuba lakho lokuqhubeka nokukhangela iifonti kwaye uzibhale ngakumbi ngazo. Ukongeza, unokuzama ezinye zezixhobo esizicebisile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Montserrat Typography
Iindidi ze-Photoshop styles